Shina: Ny Faratenin’Ireo Tibetana 19 Nandoro Ny Tenany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2012 13:01 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 한국어, Magyar, Italiano, Français, srpski, English
[Ny rohy rehetra dia amin'ny teny Shinoa raha tsy misy toro-marika.]
Tamin'ny 24 Novambra, 2012, tafakatra 79 ny isan'ireo Tibetana nandoro ny tenany nanomboka ny Febroary 2009 ho fanoherana ny lalàna nataon'ny Shinoa ho an'ny faritra mizaka tenan'i Tibet. Na dia niteny sy niangavy ny governemanta Shinoa hijery ny fangatahan'ireo Tibetana aza ny filohan'ny Filankevitra Miaro ny Zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana, ny adihevitra momba ny famoretana ara-pinoana sy ara-kolontsaina an'i Tibet sy ny firoboroboan'ny fandoroana tena ataon'ny Tibetana noho ny antony ara-politika dia mbola voararan'ny Propaganda Department of the Chinese Communist Party (CCP) / Departemanta miadidy ny Fampielezan-kevitra ao anatin'ny Antoko Kaominista Shinoa , eo amin'ny sehatra ho an'ny be sy ny maro ety anaty aterineto na ivelany.
Ilay mpanoratra sady mpanohitra Woser, izay nitatitra ny toe-draharaha momba ny zon'olombelona any Tibet, dia nanangona faniriana farany sy didy miafina 19 avy amin'ireo Tibetana nandoro ny tenany mba hanampiana ny olona hahatakatra ny zavatra takiany.
Tenin'i Nyankar Tashi farany. Sary avy amin'ny Woeser.
1. Songye Tsering (桑德才让), vehivavy 24 taona mpiompy, nandoro ny tenany teo ivelan'ny tranon'ny governemanta ao amin'ny faritr'i Zeku. faritanin'i Qinghai, tamin'ny 17 Novambra 2012 :
Tsy misy fahalalahana any Tibet, voarara tsy mahazo mody Ny Masina Dalai Lama. Any am-ponja ny Panchen Lama [laharana Lama faharoa manaraka ny Dalai Lama]. Mahery fo Tibetiana maro no manao sorona mandoro ny tenany. Tsy te-hiaina intsony aho, tsy misy dikany ny fiainana… Zanaky ny Snow Lion (Lion'ny ranomandry) izahay, nateraky ny Tibetana mena tava .Tadidio, azafady, ny fahambonian'ny tendrombohitry ny ranomandry.
2. Nyankar Tashi (娘尕扎西), 24 taona, nandoro ny tenany tany amin'ny faritr'i Tongren, faritanin'i Qinghai ny 24 Novambra 2012. Namela taratasy ho an'ny Dalai sy ny Panchen Lama ary ny Tibetana enina tapitrisa izy :
Mila fahafahana sy fahaleovan-tena i Tibet. Afaho ny Panchen ary avelao hody ny Dalai. Mandoro ny tenako aho ho fanoherana ny Governemanta Shinoa ! Dada, aza kivy noho ny amiko ianao. Manaraka ny Bouddah sy ny Fahatsarana aho. Ny faniriako dia ny hianaran'ny Tibetana enina tapitrisa ny tenin-dreniny, mitondra ny fitafy Tibetana ary miray hina.
Sarin'i Tingzin. Sary avy amin'i Woeser.
3. Tingzin (丹珍措), 23 taona, vehivavy mpiompy monina miaraka amin'ny ray aman-dreniny sy ny zanany lahy enina taona, nandoro ny tenany tany amin'ny faritanin'i Tongren, ny 7 Novambra, 2012 mialoha ny Kongresy Nasionaly faha-18 n'ny Antokon'ny Kaominista Shinoa. Ho an'ny rainy ny hafany farany :
Dada, manano-sarotra ny maha-Tibetana. Tsy afaka akosy na dia ny mivavaka eo amin'ny sarin'ny Dalai Lama aza isika. Tsy manana fahafana mihitsy isika …
4. Lhamo Kyap (拉莫嘉), lehilahy mpiompy eo amin'ny faha-20 taonany eo, manan-janaka vavy roa, nandoro ny tenany tamin'ny 20 Oktobra 2012 teo akaikin'ny fiangonana Bora ao amin'ny faritr'i Xiahe, faritanin'ny Gansu. Nisy Tibetana naman'i Lhamo nandrakitra ny antsipirihan'ny resaka nifanaovany taminy tamin'ny andro nanaovan'i Lhamo dorotenany :
Nangataka io namany akaiky io mba hanatitra azy any amin'ny fiangonana Bora tamin'ny antso amin'ny finday i Lhamo Kyap. Nambaran'io namany io fa tsy any aminy ny moto-ny ka tsy afaka manampy azy izy. Eny ary, hoy Lhamo, ho renareo ny vaovao androany. Nanontaniany raha toa ka fantatr'io namany io ny toerana marina hanaovana ny Kongresy faha-18-n'ny CCP. Nisento izy, tsy avelan'i Shina hiaina amim-pandriampahalemana isika. Avy eo notapahany ny fifandraisana.
5. Dhondup (頓珠), lehilahy miompy 61 taona, nandoro ny tenany tamin'ny 22 Oktobra 2012 tany amin'ny monasteran'ny Labrang faritr'i Xiahe, faritanin'i Gansu. Araka ny Voice of Tibet (Feon'i Tibet):
Nahazatra azy ny miteny ireo mpino mitoka-monina sasany sy ny tanora Tibetana tsy handoro ny tenany. Iaino ny fiainany ary mandraisa anjara amin'ny ho avin'i Tibet. Nolazainy fa nenjehin'i Kaominista Shinoa ireo zaza niara-nihira taminy tamin'ny 1958-1959, noho izany, nifidy ny handoro izy.
6. Gudup (古珠), Tibetana mpanoratra 43 taona, nandoro ny tenany ny 04 Oktobra 2012, tany amin'ny faritr'i Biru, Tibet. Navelany tao amin'ny kaontiny QQ , tambazotra sosialy Shinoa be mpitsidika indrindra ny farateniny. Inty ambany ity ny santionany :
Niaro ny politikan'ny feo malefaka tsy misy herisetra ho an'ny zon'ny Tibetana hizaka tena ny Masina Dalai Lama. Tibetana enina tapitrisa no nanaraka ny fampianaran'ny Masina. Nefa tsy naneho fanohanana ny CCP. Fa naleony nisambotra sy nampijaly ireo izay sahy mangataka ny zon'ny Tibetana. Alàny baràka ny Dalai Lama ary raha misy olona tsy manaiky ny maha-faritra iray any Shina an'i Tibet, dia tsy hanjavona na vonoina. Tsy raharahany ny Tibetana ary mba hampahafantarana izao tontolo izao ny toe-draharaha marina misy any Tibet, dia tsy maintsy hamafisintsika ny hetsika am-pilaminanantsika, ambarantsika amin'ny fandoroana tena ny fahaleovan-tenan'i Tibe.
7-8. Tenzin Kedhup (丹增克珠), tovolahy mpiompy 24 taona sy Ngawang Norphel (阿旺诺培), mpino mpitoka-monina fahiny, 22 taona. Niaraka nandoro ny tenany izy ireo tany amin'ny faritr'i Chindu, faritanin'i Qinghai, niaraka tamin'ny sainam-pirenena Tibetana, ny 20 Jona 2012. Niarahan'izy ireo nirakitra ny farateniny :
Tsy anananay ny fahafaha-manampy ny fivavahana sy ny kolontsain'ny Tibetana. Tsy anananay ny ara-bola hanampiana ireo Tibetana hafa. Ho an'ny tombotsoan'ny Tibetana foko niavianay, ary ho an'ny fodian'ny Masina Dalai Lama manokana, nofidianay ny handoro ny tenanay. Tianay lazaina amin'ny tanora Tibetana rehetra, inoy ny tenanareo, aza miady ianareo samy ianareo Tibetana, tsy maintsy miray hina sy miaro ny fokontsika isika.
9. Tamding That (旦正塔), lehilahy mpiompy 64 taona, nandoro ny tenany tany amin'ny faritr'i Jainca teo ivelan'ny biraon'ny mpitandro filaminana tao amin'ny faritanin'i Qinghai, tamin'ny 15 Jona 2012. Nametraka hafatra fohy izy :
Fitokiana amin-java-tsarobidy telo [Bouddha, ny lalàna Bodista ary ny mpivavaka mpitokà-monina]
Firariana fandriam-pahalemana ho an'izao tontolo izao,
Firariana ny Masina Dalai Lama ho tafody.
Fiarovana ny fanjakana Tibetana,
Handoro ny tenako aho ho fandraisana anjara [amin'ny firariana].
Sarin'i Rechok. Sary avy amin'i Woeser.
10. Rechok (日玖), lehilahy mpiompy 33 taona manan-janaka telo, nandoro ny tenany teo akaikin'ny Grand Lamasery any Dzamthang, Faritanin'i Sichuan, ny 30 May, 2012. Voarain'ny Ivon-toerana Tibetana Miaro ny zon'olombelona ny farateniny ny 18 Aogositra :
Iriko ny hisian'ny fiadanana sy ny fahasambarana eto an-tany. Aza mifaly amin'ny famonoana sy ny fivarotana biby atao sorona, aza mangalatra ho an'ny fiverenan'ny Masina Dalai Lama eto Tibet. Tokony hiresaka ny Tibetana samy Tibetana ary tsy tokony hiady. Vonona hiaritra ny hirifiry sy ny fijalian'ny miaina rehetra aho. Raha sanatria ka mianjera eny an-tànan'ny Antoko Kaominista Shinoa aho, dia miangavy aza manohitra. Tsy maintsy miray hina sy mianatra ny kolontsaintsika isika. Ry fianakaviako, aza kivy amin'ny fandoroako ny tenako.
11-12. Soinam (索南), 24 taona, mpianatra. Choephak Kyab (曲帕嘉, 25-taona, mpianatra. Nandoro ny tenany teo akaikin'ny Grand Lamasery any Dzamthang, faritanin'i Sichuan izy roa ireo tamin'ny 19 Aprily 2012, fa toerana samy hafa. Navoaka tao amin'ny YouTube ny faratenin'izy roa ireo. Inty ambany ity ny santionany :
Manana finoana sy kolontsaina hafa ny Tibetana. Mino ny fitiavana sy ny fiaraha-miory miaraka amin'ny fanajana ny hafa ny firenena. Nefa, nobodoina, noporetina ary navadik'i Shina i Tibet. Doranay ny tenanay noho ny alahelonay sy ny tsy fisian'ny zo fototra amin'ny maha-olona, ary ho an'ny fiadanan’ izao tontolo izao. Ny fahorian'ny Tibetana tsy manana ny zo fototra amin'ny maha-olona dia lehibe lavitra noho ny fandoroanay ny tenanay.
13. Sobha Rinpoche (江白益西), Tibetana 27 taona sesintany avy any amin'ny faritr'i Dawu, faritanin'i Sichuan, nandoro ny tenany tany Delhi noho ny fanoherany ny famangian'ny Filoha Shinoa any India tamin'ny 26 Martsa, 2012. Ity manaraka ity ny santionan'ny faniriany farany :
Ry Tibetana sakaizako, ilaintsika ny fahamendrehana sy ny faharisihana, ho an'ny fahasambaran'ny ho avintsika. Ny fahamendrehana no fanahin'ny maha-olom-pirenena ary ny faharisihana dia ho an'ny fahamarinana, ireo no tondro zotra hitondra antsika ho any amin'ny hoavy sambatra. Ry Tibetana sakaizako, mba hizahàntsika ny hasambarana zarain'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, dia tsy maintsy tsaroantsika ny fahamendrahantsika ary manao ezaka amin'ny sehatra rehetra isika. Ny fahamendrehana no fahendrena manavaka ny marina amin'ny diso.
Ny fahalalahana no làlana mankany amin'ny fahasambarana ho an'ny manan'aina rehetra. Raha tsy misy ny fahalalahana, dia tonga tahaka ny jiro labozia apetraka eny amin'ny rivotra isika, ny anjaran'ny tibetana enina lavitrisa. Azontsika ny fandresena raha miray hina ny Tibetana avy amin'ny faritra telo mizaka tena. Miangavy ,aza ariana ny finoanareo.
14. Tsering Kyi (才讓吉), mpianatra 19-taona , nandoro ny tenany tao an-tsenan'ny faritr'i Maqu, faritanin'i Gansu tamin'ny 3 Martsa 2012. Araka ny tantara nataon'ireo mpanao tatitra :
Tamin'ny volana Janoary, niady hevitra momba ny dorotena tamin'ny iray tamin'ny fianakaviany i Tsering Kyi. Nambarany fa azony ny antony nifidian'ireo olona ireo hanao izany fa : ” Tsy misy olona mendrika ny hiaina tahaka izao”.
15. Nya Drul (朗卓), mpianatra 18-taona, nanao sorona ny tenany tany Camtang, faritanin'i Sichuan tamin'ny 19 Febroary, 2012. Nataony nanana endrika tononkalo ny teniny farany :
Atrakao am-pahavitrihana ny lohanao, ho an'ny fahamendrehako.
Ry ray aman-dreniko izay omeko ny fitiavana lalina, ry rahalahiko malala ary ry fianakaviana, tsy maintsy handao ity izao tontolo izao ity aho.
Ampirehetiko ny tenako, ho an'ireo Tibetana miara-miaritra hirifiry.
Ny faniriako ho an'ireo zanakalahy sy zanakavavy Tibetana, tsy maintsy miray hina ianareo.
Raha Tibetana ianareo, tsy maintsy mitondra ny fitafy Tibetana ary miteny Tibetana. Aza adino fa Tibetana ianareo.
Raha miara-miaritra hirifiry ny Tibetana, tiavo ny ray aman-dreninareo ary miraisa hina. Tiavo ny fiainan'ny zavamanan'aina rehetra sy ny biby.
16. Sobha Rinpoche (索巴仁波切), 42 taona, nandoro ny tenany teo amin'ny toerana iray tany amin'ny faritr'i Gade, faritanin'i Qinghai ny 8 Janoary 2012. Ny teniny farany, izay azo jerena ato , dia nanamafy ny finoany :
Toy ny Bouddah izay nanolotra ny tenany ho sakafon'ny tigra. Ireo Tibetana izay nanolotra ny ainy dia mitovy tanjona amiko – atolotray ny ainay ho an'ny rariny, fahamarinana, ary fahalalahana.
17. Tenzin Phuntsog (丁増朋措), tantsaha 41-taona sady mpivavaka mpitoka-monina fahiny, nandoro ny tenany teo anoloan'ny gvrenemantan'ny distrikan'ny faritr'i Qamdo, Tibet, tamin'ny 01 Desambra, 2011. Namela hafatra efatra izy. Inty ambany ity ny hafany farany :
Na rahoviana na rahoviana aho no misaina an'i Tibet sy ny fahoriana tao amin'ny Monasteran'i Karma, dia tsy afaka ny hanohy miaina am-piandrasana.
18. Phuntsog (彭措）, mpivavaka mpitoka-monina ao amin'ny fiangonan'i Gulden,19 taona, nandoro ny tenany tany amin'ny faritr'i Ngawa, faritanin'i Sichuan tamin'ny 16 Marsa, 2011. Araka ny resadresaka natao tamin'ireo mpivavaka mpitoka-monina hafa tao am-piangonana, dia nolazainy an-dry zareo hoe :
Tsy zakako intsony ny fahoriana ato am-poko. Avelako ao aoriana ny marika navelan'izao tontolo izao amin'ny 16 Martsa 2011.
19. Tapey (扎白), mpivavaka mpitoka-monina ao amin'ny fiangonan'i Gulden, 20 taona, nandoro ny tenany tany amin'ny faritr'i Ngawa, faritanin'i Sichuan ny 27 Febroary 2009. Araka ny lahatsoratra nasehon'ny The New Yorks Times, tamin'ny 02 Jona 2012, dia nanoratra Tapey ary nilaza fa hamono tena raha toa ka sakanan'ny governemanta ilay fotoam-pivavahana lehibe nanan-danja tamin'io andro io mihitsy.